हेर्नुहोस् , यी राशिका महिलाहरु पुरुषलाई आफ्नो खुट्टामा झुकाउन्छन् - Khabar Time
in जीवन शैली, रोचक
काठमाडौं । विवाह पछि श्रीमान श्रीमती बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने धेरैको चासो हुने गर्छ। विवाह पछि केहिको सम्बन्ध जीवन भर टिक्ने गर्छ भने केहीको खासै सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन। सम्बन्ध टिक्ने र नटिक्नेमा श्रीमान श्रीमतीले एक-अर्का प्रति देखाउने जवाफदेहितामा भर पर्ने गर्छ।
मेष राशि :साँचो कुरा र तथ्यमा अडिक रहने बानि भएमा हुन्छन् मेष राशि हुने महिलाहरु। यस राशि हुने महिलाहरु साथै हरेकको विश्वास पनि सजिलै जित्ने क्षमताका पनि धनि हुने हुँदा सबैको प्रिय हुने गर्छन्। शान्त स्वभावका हुने भएता पनि आफ्नो निर्णयमा जिद्दी हुने हुँदा आफ्नो पतिलाई झुक्न वाध्य बनाउने गर्छन् यस राशि हुने महिलाहरु।
वृश्चिक राशि :यस राशि भएका महिलाहरुलाई रहस्यमयी मान्ने गरिन्छ। रिसाएको खण्डमा सजिलै सम्झाउन नसकिने हुँदा आफ्नो पतिलाई झुक्न वाध्य बनाउँछन्। हरेक कार्य पूर्ण रुपले फत्ते गर्ने क्षमाता हुने र आत्मविश्वास पनि उच्च हुने हुँदा आफ्नो पति भन्दा हरेक कार्यमा अगाडी हुन्छन् यस राशि भएका महिलाहरु। जसको कारण पतिहरु झुक्न वाध्य हुन्छन्।
बिहेअघि यौनसम्पर्क राखेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ रोचक तथ्य !!
पैसा कसरी बचाउँने ? यस्तो गर्नुहोस् कहिले पैसाको कमि हुदैन